Maxaan u Yeelan La’nahay Wax Soo Saar? | Tuke Somalism - Tukesomalism.com
Ilhaan Ciise Maxamed — June 27, 2019
Soomaaliya shalay waxa ay lahayd wax soosaar waxaana laga soo saari jiray Sokor, Taraq, Dhar,Kobo Iyo Waxyaabo Badan. Sidookale dalkeennu ma’uusan heysan dhallinyaro badan sida maantay ookale, malahayn dalka aqoonyahanno kufilan sidookale majirin ilbaxnimada maantay aan heysanno, oo ah in aad cilmi waliba baran karto adiga oo gurigaaga jooga.
Maxay Tahay Sababta Aan Loo Helin Dhallinyaro Wax Soo Saar Leh, Dhan Walibaba Ha’ahaatee?
Burburkii kaddib dalku waxa uu galay xaalad jahwareer ah sida aan Taariiqda ku heyno, waa laqaxay, waala tahriibay, waxaa dhacay dagaal waxaana dhacday dhimaso, waxaa bur-bur kuyimid dhammaan wax soo saarkii dalka, waxaa kaaga siidaran oo bur-buray waa waxbarashadii, waxaana dowladda raacay manaahijta saxda ah ee waxbarashada dalka.
Intaa kaddib aqoonyahanno iyo ganacsato ayaa isku howlay in ey dalka ukacaan dibna usoo celiyaan waxbarashadiisa, hasa ahaatee su’aasha isweydiinta mudan ayaa ah:
Waxbarashadu Miyay Noqotay Middii Loobaahnaa?
Maxaqireyno in ey shaqo adag qabteen Macallimiintii iyo dakiikalaba ee isku howlay dib ubilaabista waxbarashada, aniga Ilhaan ahaan waxa aan wax ku soo bartay habka bareefatka ah ama waxbarashada goonida ah (aan dowliga ahayn) aniga oo ka-gaaray illaa heer Jaamacadeed. Waxa aana hubaa in waxbarashudu eysan ahayn middii larabay, waxaana xasuustaa maadada Afka-Soomaaliga iney muhiim ahayn marki iskuulka lajoogay marki loo fiiriyo luqadaha kale ee naloo dhigaayay.
Gabi ahaanna iskuulada bareefatka ah waxbarashadoodu waa ey hooseesay sida la’isku raacsanyahay. Sidookale Jaamacadaha ayaa tayo ahaan ladhaliilaa (aan dowliga ahayn), cilladahaas oo idil oo isbiirsaday ayaan dhihi karnaa waa sababta ey maskaxdu u burqan la’dahay ama wax soosaarkeedu uu uyaryahay.
Maxaan Uyeelan La’nahay Wax Soo Saar?
Haddii aad damacdo in aad gaari sameyso si looyiraa dalka Soomaaliya gaari ayaa laga soo saaray waxa aad ubbaahantahay: aqoon, dadaal iyo taageerid.
Aad ayaan ujeclaan lahaa in aan arko agabka tiknoolajiyadda ku shaqeeya qaarkiis oo ey kuqorantahay waxaa soosaartay Soomaaliya.
Dhallinyarooy dadaala, Mahadsanidiin.
Tags: Maxaan Uyeelan La’nahay Wax Soo Saar?
Next post Waa Maxay Cudurka Teetanada?
Previous post Maxaa Sababo Ilmaha Qaar Inay ku Adkaato Waxbarashada?